E nwereike ịgbachi akwa mmiri 'Third Mainland' - BBC News Ìgbò
E nwereike ịgbachi akwa mmiri 'Third Mainland'
11 Julaị 2018
Nkenke aha onyonyo A rụrụ akwa mmiri 'Thirdmainland' na 1990 n'ọchịchị Ibrahim Babangida
Gọọmentị etiti ga-agbachi akwa mmiri ''Third Mainland'' nke dị na Legọsị.
O kwuputere ihe a site n'ọnụ onye na-ahụ maka ọrụ okporouzọ na Legos akpọrọ Adedamola Kuti.
Kuti kwuru na a na aga-enwe mkparịtaụka maka ịgbachi ma mezie ya bụ akwa mmiri.
Akwa mmiri a bụ ebe ọtụtụ ndị bi na 'Mainland' sị ebi ije ha nke nke ma ha na-eje ''Island'' ma bụrụkwa ebe esi eje ọtụtụ ụlọ azụma ahịa na ọrụ bekee dịkwa.
Akwa mmiri Naija nke abụọ: Nke bụ eziokwu?
Akụkọ kachasị n'abalị a: Ọrụ agaghị akwụsị n'akwa Niger nke abụọ
Anambara amachiela 'ọkada' n'Onicha na Ọka
Kuti kwukwara na ndị ọnụ na-eru n'okwu ga-ezukọ taa ka ha wee kpaa ka a ga-esi gbochie ntaramahụhụ mmezi a nwereike ibutere ndị ọkwọ ụgbọala nesikarị ụzọ ahụ agafe.
O kwughị oge a ga-agbachị okporoụzọ akwa mmiri a maọbụ mgbe a ga-ebido mezi we ya mana o kwuru na e nereiek ị gbachi ya na elekere 12 nke nderi nke ụbọchị Julai 12 ka ha wee lele ya ọfụma ma mezitu ya tupu ha emepe ya ụbọchị ụka n'ime abali.
N'ọnụ ya, ''ndị ọnụ na-eru n'okwu ga-abia nzukọ a gụnyere ndị ọrụ nhazi ụgbọala na-aga n'okporoụzọ,ndị na-ahụ maka njem okporoụzọ, ndị na-akwọ gwongworo nakwa ndị ọkwọ ụgbọala, ndị uweojii na ndị ọzọ.
Na ọnwa May nke afọ a , Ka ndị so n'oche ochịchị onyeisiala akpọrọ Federal Executive council na bekee binyere aka n'akwụkwọ kewapụtara ọnụ egọ Ijeri naira 18 na ọkara maka mmezi na nchekwa akwa mmiri a.
Akụkọ ndị ọzọ ga-amasị gị:
Ụmụaka 12 na onye nchịkọta ha apụtala n'ọgba Thailand
Ronaldo adịla njikere ịgafe Juventus
Kemi Adeosun: Ihe NYSC kwuru maka asambodo
Covid-19 in 60 seconds: Anyanwụ, ekpomọkụ ọ na-agwọ coronavirus?
NCDCgov: Ekwupụtala na Coronavirus atala isi mmadụ anọ
Lee mba ndị COVID-19 echetabeghi
Onye gụrụ 'Lean on me' Bill Withers anwụọla n'afọ 81